Tag: contract management | Martech Zone
Tag: kontrakiti manejimendi
Conga Chibvumirano Lifecycle Management: Kuvandudza Kushanda Kwekuita NeGwaro Kubuda Kwemagetsi
Mugovera, October 10, 2020 Mugovera, October 10, 2020 Douglas Karr
Kuitisa bhizinesi rinonzwa kusagadzikana kumutengi mukutarisana nemusika kuri kuwedzera mukuoma hazvisi nyore feat. Unyanzvi hweConga uye yakazara solution suite yekushambadzira mashandiro - maitirwo akakomberedza Gadzira Mutengo Quote (CPQ), Mutengi Lifecycle Management (CLM), uye Dhijitari Zvinyorwa - zvinobatsira mabhizinesi kugadzirisa kunetseka nechivimbo kuti vagone kupa kusagadzikana kwevatengi ruzivo uye nekukurumidza mari. NaConga, mabhizinesi anomhanyisa kukurumidza kusangana nezvinodiwa nevatengi nhasi uku achiwedzera kugwinya
Chipiri, August 15, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
MuChitatuCM yechitatu yegore State of Contract Management, vanotaura kuti chete 32% yevaongorori vakapindura vari kushandisa kontrakiti manejimendi mhinduro, kukwira 6% kupfuura gore rapfuura. Kontrakita Management Systems inopa sangano nenzira dzekunyora zvakachengeteka kana kurodha zvibvumirano, kugovera zvibvumirano, kuongorora zviitiko, kugadzirisa kugadzirisa, kugadzirisa maitiro ekubvumidza, uye huwandu hwekondirakiti yehuwandu hwekuzivisa. Hazvishamise, asi zvinotyisa kuti ruzhinji rwemasangano anotumira zvibvumirano kuburikidza